မြန်မာနိုင်ငံနှင့် နိုင်ငံတကာမှ အလှုရှင်များရဲ့ စုပေါင်းလှုဒါန်းအားဖြင့် ပဲခူးတိုင်း၊ ဥဿမြို့သစ်၊ သဇ္ဇနာမပညာဇေယျုံပရဟိတ(ဘက)ကျောင်း၊ ပေ (၇၀ x ၂၀) စာသင်ကျောင်းဆောင်ကို Friday, 23 August 2013မှာ ဆောက်လုပ်ခဲ့ရာ အခုဆိုရင် လုံးဝ ပြီးစီးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
3.11.2013၊ တနင်္ဂနွေနေ့မှာ အဆိုပါ စာသင်ကျောင်းအား ရေစက်ချ လှုဒါန်းတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစီအစဉ်အနေနဲ့ သံဃာတော်များ နှင့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား ကလေးငယ်များအား နေ့ဆွမ်း၊ နေ့လည်စာ ကပ်လှုကြွေးမွေးပြီး ရေစက်ချ လှုဒါန်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ကနေ ပဲခူးအထိ အသွားအပြန် ကားစီစဉ်ပေးမှာ ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လိုက်ပါ ရေစက်ချလိုတဲ့ အလှုရှင်များ အနေနဲ့ .
၁။ကျော်စွာစိုးမြတ် - 094 2105 9872
၂။ကိုငြိမ်းနိုင် - 097 3123 091
၃။ဒေါ်အိအိစိုး 095 1524 63
၄။သမီးစံ၊အဘီး 094 2008 7435
အထက်ပါ ဖုံးနံပါတ်များသို့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား.
Posted by ကိုရင် at 14:09
Labels: အလှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍, ဥသာ